साइकलमा सामान बेचेर दाइले डाक्टर बनाएका भाइ - SandeshBahak
२३ पुष २०७५, सोमबार १२:१३ January 16, 2019 Sandesh BahakLeaveaComment on साइकलमा सामान बेचेर दाइले डाक्टर बनाएका भाइ
मानिसले जीवनमा अनेक सुख-दुख भोगेकोे हुन्छ । ति भोगाइहरु शब्दमा उतारिए ठूला–ठुला पुस्तक बन्छन् । तर कमै व्यक्ति जो खुल्ला किताब जस्तै बाँचेका हुन्छन् । यस्तै खुल्ला किताब नै हुन् डा.अरुण गुप्ता पनि । चौतिसौँ वसन्त पार गरेका गुप्ताको जन्मघर उदयपुर बेलटारको आफ्नै इतिहास छ । साथै उनका अध्ययनको संघर्षसँगै अघि बढेका जिवनका कथा निकै रोचक छन् । उनै गुप्ताका जीवनको कथा र व्यथाको यात्राबारे सन्देशवाहकका लागि पुर्ण कुमार राइले तयार पारेको सामग्री :
डा. गुप्ताको बाल्यकाल उदयपुरको बेलटारमै बित्यो । पहाडबाट झरेका भरियाहरुले गर्दा हफ्ता को २ दिन नुनको व्यापार हुन्थ्यो । यसैले परिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । बुधबार र बिहिबार पसलमा निक्कै भिड हुनाले बुवालाइ ब्यापारमा सघाएको क्षण सम्झिन्छन्, गुप्ता ।
अध्ययनमा मासिक शुल्कले समस्या
डा. गुप्ताकोआमा उषादेवी छोरालाई अंग्रेजी विद्यालयमा पढाउन चाहन्थे । त्यसैले पनि गुप्ताको औपचारिक अध्ययन बेलटारकै एक अंग्रेजी विद्यालयबाट आरम्भ भयो । गुप्ता जेहेन्दार भएकाले प्रथम श्रेणीमा पास हुँदै गए । तर उनी कक्षा ३ मा पुगेसँगै घरको आर्थिक अवस्थाले उनको पढाइ धान्न नसक्ने स्थिति बन्यो । त्यतिबेला उनको मासिक अध्ययन शुल्क रु.१२० थियो । त्यसपछि गुप्ता आफैले बुवालाई आफु सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सुनाए । अन्तत : बुवा सहमत भएपछि उनी गाउँकै श्री ज्योति मा.वि कक्षा ५ मा भर्ना भए । उनले त्यहाँ छात्रवृति पाएपछि झनै अध्ययनमा मेहनतका साथ लागिपरे ।
डा. गुप्ता आमाको प्रेरणाका कारण पढाइमा जेहेन्दार थिए । उनले ज्योति मा। वि बेल्टारबाट २०५८ मा एसएल्सी फस्ट डिभिजन गरे । यो विद्यालय, समाज र परिवारको लागि गौरबको विषय थियो । आजभोली उनी आफुलाई अध्यापन गर्ने गुरुहरु रवि सर, राज कुमार ओझा, तनुक लाल सर, भरत झा, रमाकान्त सर, टंक गुरागाइ सर र अन्य सबै शिक्षकहरु लाई निक्कै आदरभावले मिस गरिरहन्छन् ।
काठमाण्डौको सुरुवाती दिन
डा.गुप्ता एसएलसीपछि अध्ययनका लागि काठमाडौँ आउदाको दिन खुब सम्झन्छन् । उनी भन्छन्–‘म साइन्स पढ्न भनेर अमृत साइन्स कलेजमा गएँ, तर बुवाले त्यहाँ राजनीति निक्कै हुन्छ भनेर निजि कलेजमा भर्ना गरिदिनु भयो । त्यहाँ मैले छात्रवृति पनि पाए ।’
भाइको अध्ययनमा दाइको दुख
काठमाण्डौको महंगी यही हो । डा. गुप्ताको अध्ययनमा पनि महंगीले निकै सकस पैदा गर्यो । तैपनि दाई अरविन्द गुप्ताले खर्च जुटाइदिएका कारण उनको अध्ययन सहज भयो । गुप्ताका दाई भाइलाई डाक्टर बनाउन भनेर बेल्टार वरपरका बजारमा साइकलमा सामान राखेर बेच्थे । र, भाइको अध्ययनका लागि खर्च जुटाइदिन्थे । दाइको त्यो मिहिनेत देखेर पनि गुप्तालाई पढाइप्रति अझ संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्यो ।
उनी भन्छन्– ‘दाईको त्यो मिहिनेत हेरेर मलाई पढाइप्रति अझ संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्यो, यसैकारण मैले कक्षा ११ मा कक्षा टप गरे । र कक्षा १२ का लागि मलाई फुल स्कोलरसिपमा अध्ययनको मौका मिल्यो । यसपछि मैले १२ पनि बायोलोजी ग्रुपमा कलेज टप नै गरे ।’
डा.गुप्ताले डाक्टर बन्ने चाहनाले पहिलो पटक बि.पी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानको इन्ट्रान्स परिक्षा पनि दिए । तर एम.बि.बि.एसको परिक्षामा नाम निकाल्न भने सफल भएनन् । तर ‘ब्याच्युलर इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलोजी’ कोर्समा उनको छात्रवृति निस्कियो । उनले त्यही भर्ना भएर पीएचडीसम्मको अध्ययन पुरा गर्ने अठोट लिए । यसरी बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उक्त विषयमा स्नातक पनि गरे ।
गुप्ताले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ‘अल इण्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेस’(एम्स)बाट न्युक्लियर मेडिसिन विषयमा छात्रवृति पाए । र, सो विषयमा स्नात्तकोत्तर टप गरे । यसरी डा.गुप्ताले एम्समा गरेको पेटरसिटिसम्बन्धि अनुसन्धानको सोधहरु अन्तराष्ट्रिय कन्फेरेन्सहरुमा छनौट समेत भएका थिए ।
जागिरे हुँदाका क्षण
डा.गुप्तालाई बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी बिभागमा जागिरको अफर आयो । उनको दक्षताको निक्कै आवस्कयता भएको हुनाले उनलाई त्यहाँ जागिर को अफर आएको थियो । उनले पनि आफ्नै देशको सेवा गर्ने भावले भारतको निक्कै सुबिधा सम्पन्न जगिरहरुको अफर छोडेर नेपाल आए । तर बिडम्बना उनलाई जुन पद (एसिस्टेन्ट प्रोफेसर) को लागि बिज्ञापन गरेर बोलाइएको थियो, त्यो पद नदिएर त्यस भन्दा तल्लो पदमा राखियो । यसले उनलाई मानसिक पिडा दियो । उनी भन्छन्–‘जब मलाई एसिस्टेन्ट प्रोफेसरका लागि वि.पी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा बोलाइयो तर पछि त्यो भन्दा तल्लो पदमा जागिरे हुन बाध्य बनाइयो ;यसले मलाई निकै मानसिक पिडा दियो ।’
संघर्षका उपलब्धिहरु :
एम्समा गरेको अनुसन्धानको को सोधहरु प्रस्तुत गर्नका लागि २०१४ मा जापान र वियेतनामबाट ट्राभल ग्रान्ट पाएका थिए ।
जापानमा ‘योङ्ग इन्भेस्टिगेटर एवार्ड’ पनि पाए ।
२०१५ मा उनले दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय ‘सोल नेसनल युनिभर्सिटीको कलेज ओफ मेडिसिनमा न्युक्लियर मेडिसिन’ विभागमा पीएचडी गर्नको
लागि छनौट भए ।
करिब ५ वर्षपछि प्रतिष्ठानमा उनको एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पदमा प्रोमोशन हुने भएकाले बिज्ञापन अनुसार उनले दरखास्त हाले । अन्तरबार्ताबाट उक्त पदमा उतिर्ण पनि भए ।
बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानबाट अध्ययनबिदा लिएर पीएचडी गर्न कोरिया गए । उनी त्यहाको सबैभन्दा ठुलो पीएचडी फेलोसिप अवार्ड (प्रेसिडेन्ट फेलोसिप) जित्ने पहिलो नेपाली पनि बने ।
एसियाकै टप ‘सोल नेसनल युनिभर्सिटी’को ल्याबमा बिश्व विख्यात प्रोफेसरहरुसंग बसेर अनुसन्धान गरे ।
पीएचडीसँगै उनले आफ्नो अनुसन्धानको सोधहरु प्रस्तुत गर्न २०१७ मा अष्टेलिया गए । भने २०१८ मा अमेरिकाको फिलेदेल्फिया जाने अवसर मिल्यो । उनले दिनरातको मेहनतले ३ वर्षमै पीएचडी सकी नेपाल फर्के ।
आफ्नै देश प्यारो
उनलाई कोरिया तथा युरोप र अमेरिकाबाट रिसर्चको लागि निक्कै ठुला अवसरहरु आए । तैपनि उनले आफुले हासिल गरेको ज्ञान सिप नेपालमै रहेर नेपालीका लागि प्रयोग गर्ने अठोटसहित नेपाल फर्किए ।
उनि न्युक्लियर मेडिसिन को नयाँ प्रबिधिबाट क्यान्सरको परिक्षण तथा उपचारसम्बन्धि बिषयमा पीएचडी गरेर नेपाल फर्किने पहिलो नेपाली हुन् ।
उनको नेपाल फर्किने मनसाय देखेर कोरियामा रहेका प्रवास संगठनहरु (उदयपुर सेवा समाज, मधेसी समाज, कोरिया) ले भब्य सम्मानका साथ बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । डा.गुप्ता निक्कै उत्साह र उमङ्गका साथ पीएचडी सकेर नेपाल फर्किएका थिए ।
उमंगसँगै थपिएको गुनासा
उनले नेपाल आएपछि निक्कै मानसिक यातना सहनु परेकोछ । अध्ययन बिदा सकेर वि.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाजिर भएपछि नियमपुर्वक पाउनुपर्ने पद र सुबिधा उनले पाएनन् । यसले उनलाई चरम मानसिक यातना दियो । बिदेशका अवसरहरु छाडेर नेपालमा नै सेवा गर्ने भावना बोकेर आएका डा. उनलाई देशले सम्मान गरेको तर प्रतिष्ठानले अन्याय गरेको डा.गुप्ता बताउँछन् । ‘नियमपूर्वक निर्णय भैसकेको पद र सुबिधा नदिएर म माथि अन्याय गरिएको छ ।’ न्युक्लियर मेडिसिनसंग सम्बन्धित एक्लो पी.एच.डी. डा.गुप्ता आफु नेपाल फर्किएर इन्टरनेसनल कोलाब्रेसनमा क्यान्सरसम्बन्धि अनुसन्धानहरु गरौला भन्ने सोचेको बताउँछन् । र, देशमा यस बिषयसंग सम्बन्धित नीति नियम बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न विदेशको अवसरहरु छाडेको सुनाउँछन् । तर अहिलेको अवस्था सुनाउँदै उनि भन्छन्– प्रतिष्ठानले झन् सम्मानजनक वाताबरण बनाएर बढी भन्दा बढी लाभ लिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै मलाई मानसिक पिडा दिनु समग्र देशकै लागि दुखद कुरा हो ।’
सुविसुको कार्यालयमा आगलागी, बालुवाटार बन्यो धुँवामय
२२ श्रावण २०७६, बुधबार १३:५८ August 7, 2019 Sandesh Bahak
आजको पत्रपत्रिका : भारतको ऋण सहयोगमा बनेका अधिकांश सडक अलपत्र, राखेपमा पेस्की फर्छ्योट नगर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म
२७ श्रावण २०७६, सोमबार ०७:२९ August 12, 2019 Sandesh Bahak
११ भाद्र २०७६, बुधबार ०५:०६ August 28, 2019 Sandesh Bahak